Wararka - Maxaad ka ogaanaysaa dabaqa qolka jiifka
Qolka jiifka wuxuu noqon karaa lebensraum muhiim u ah nolosheena. in qaab dhismeedka qolka jiifka uu raqiis yahay iyo inkale waxay saameyn ku yeelan kartaa heerka nasashada dadka, ka dib taabashada nolosha dadka, shaqada iyo waxbarashada. haddaba si kastaba ha noqotee waa in qolka jiifka loo qaabeeyaa mar la cusboonaysiiyo?
alaabada sagxadda vinylalkohol
Marka sidee u dooran kartaa dabaqa qolka jiifka? Cilmi baaris ayaa muujisay in dadku badh waqtigooda ku qaataan qolka jiifka. Tayada deegaanka qolka jiifka kaliya kuma xirna tayada jiifka dadka, laakiin sidoo kale waxay si toos ah u saameysaa caafimaadka dadka. Marka, sagxadda jiifka waa inay ahaadaan alaab-saaxiibtinimo iyo waxyaabo aan wasakheyn; Meel loogu talagalay qolalka jiifka yar ama kuwa aan si fiican u iftiimin, waxaad dooran kartaa dabaq midab khafiif ah leh oo ka dhigaysa meesha bannaan mid weyn oo ifaya.
WPC Vinyl Gogosha Aqoonta:
1.Raw qalabka waa 100% ilaalinta deegaanka
Qalabka ceeriin ee dabaqayagu waa cusbi PVC tayo sare leh oo ah bii'ada, sunta aan sunta ahayn iyo ilaha la cusboonaysiin karo, kuma jiraan waxyaabaha waxyeelada leh sida benzene, formaldehyde, matal culus, ma jiro wax xasiloon oo milmi kara, shucaac la'aan.
Dabaqayagu wuxuu leeyahay iska caabin khaas ah oo khaas ah, lakabka iska caabbinta-dabaqa oo la barbardhigayo walxaha caadiga ah ee dabaqa, Dabaqayagu wuu sarreeyaa marka qoyan.
3. Antimildew iyo Dabaqa Antibacterial
Dusha sare ee dusha sare iyada oo loo marayo bakteeriyada khaaska ah, ka hortagga faddaraynta, waxay leedahay awood adag oo lagu dilo bakteeriyada, waxay xakameysaa taranka bakteeriyada.
4.Xabad iyo Raaxo
Dabaqayada jilicsan, jilicsan, waxqabadka wanaagsan ee kuleylka kuleylka, kuleylka si siman, socodka caga cag leh ee dabaqayaga ayaa dareemaya diirimaad iyo raaxo.
5.Waterless iyo Dampproof
Qaybta ugu weyn ee dabaqayagu waa cusbada vinylka, vinyl layliga wax cunto ah kuma laha biyo, mana dhici doono caaryo qoyaan badan awgood.
6. Si waalli ah oo khafiif ah
Dhumucdeena sagxadda 3.2mm -12mm, miisaanka 2-7.5kgs / sq.m., In ka yar 10% waxyaabaha dhulka ka dhexeeya, waxay leedahay faa iidooyin aan lala barbardhigi karin xamuulka iyo keydinta booska dhismaha sare, sidoo kale waxay leedahay faa'iido gaar ah dhismaha hore. dib u dhiska.
hadaad ubaahantahay WPC Gogosha Vinyl Alaab-qeybiye, waad noo soo diri kartaa farriin.
Waqtiga boostada: Abriil-26-2020